Chibvumirano chevanopa: Chii chaunofanira kuziva? | Law & More B.V.
Blog » Chibvumirano chevanopa: Chii chaunofanira kuziva?
Chibvumirano chevanopa: Chii chaunofanira kuziva?
Pane zvinhu zvinoverengeka zvekuve nemwana nerubatsiro rweanopa mbeu, sekutsvaga mupi akakodzera kana nzira yekumisikidza. Chimwe chinhu chakakosha mune ino mamiriro hukama hwepamutemo pakati pebato rinoda kuve nepamuviri kuburikidza nekumisikidza, chero vadyidzani, mupi werume nemwana. Ichokwadi kuti chibvumirano cheanopa hachidiwe kudzora hukama hwepamutemo uhu. Nekudaro, hukama hwepamutemo pakati pemapati hwakaomeswa zviri pamutemo. Kuti tidzivirire kukakavara mune ramangwana uye nekupa chokwadi kune mapato ese, zvakangwara kuti mapato ese apinde muchibvumirano chevanopa. Chibvumirano cheanopa chinovimbisawo kuti zvibvumirano pakati pevangangodaro vabereki nevanozopa hurume zviri pachena. Chibvumirano chega chega chevabatsiri chibvumirano chega, asi chibvumirano chakakosha chevose, nekuti icho zvakare chine zvibvumirano nezvemwana. Nekunyora izvi zvibvumirano, pachavewo nekusawirirana kushoma nezve iro basa remupi muhupenyu hwemwana. Pamusoro pe mabhenefiti ayo chibvumirano chemupi chinopa mapato ese, ino blog inoteedzana inokurukura kuti chibvumirano chemupi chinosanganisirei, ndeupi ruzivo rwunotaurwa mukati maro uye nezvibvumirano zvekongiri zvingaitwe mairi.
Chii chinonzi chibvumirano chemupi?
Chibvumirano cheanopa kana chibvumirano cheanopa chibvumirano chibvumirano chinobvumirana pakati pevabereki (vabereki) nevanopa mbeu. Kubva 2014, mhando mbiri dzekupa dzakasarudzika muNetherlands: B uye C rubatsiro.
B-rubatsiro zvinoreva kuti chipo chinoitwa neanopa wekiriniki isingazivikanwe nevabereki vanokarirwa. Nekudaro, urwu rudzi rweanopa rwakanyoreswa nemakiriniki neiyo Foundation Donor Data Chakagadzirwa Fertilisation. Nekuda kwekunyoreswa uku, vana vakabatwa nhumbu vanozowana mukana wekuziva kwaakabva. Kana mwana akabata pamuviri asvika zera regumi nemaviri, iye anogona kukumbira rumwe ruzivo rwekutanga nezverudzi urwu rweanopa. Iyo yakakosha data ine chekuita, semuenzaniso, chitarisiko, basa, chinzvimbo chemhuri uye hunhu hunhu sezvakataurwa nemupi panguva yekupa. Kana mwana akazvarwa asvika zera regumi nenhanhatu, iye kana iye anogona zvakare kukumbira iyo (imwe) dhata yemunhu wega yerudzi urwu rweanopa.
C-rubatsiro, kune rimwe divi, zvinoreva kuti zvine chekuita nemupiro uyo anozivikanwa kuvabereki vakatarisirwa. Rudzi urwu rweanopa runowanzo kuve mumwe munhu kubva padenderedzwa revazivikanwi kana shamwari dzevangangodaro vabereki kana mumwe munhu uyo ​​vangangove vabereki pachavo vakawana online, semuenzaniso. Rudzi rwekupedzisira rweanopa ndirowo mupiro uyo zvibvumirano zvevapi vanowanzo gumiswa nazvo. Kubatsira kukuru nerudzi urwu rweanopa ndeyekuti vabereki vakatarisirwa vanoziva mupi uye nekudaro hunhu hwake. Zvakare, hapana chekumirira runyorwa uye insemination inogona kuenderera nekukurumidza. Nekudaro, zvakakosha kuita zvibvumirano zvakanaka kwazvo nerudzi urwu rweanopa uye kuzvinyora. Chibvumirano cheanopa chinokwanisa kujekesa pamberi apo kana paine mibvunzo kana kusava nechokwadi. Panofanira kunge paine kumhan'ara, chibvumirano chakadai chinoratidza kutarisisa kuti zvibvumirano zvakaitwa ndezvipi kuti vanhu vabvumirana pamwe chete uye kuti vavariro dzaivepi panguva yekusaina chibvumirano. Kuti udzivise kusawirirana kwepamutemo nekuenderera mberi kune anenge apa, saka zvinokurudzirwa kukumbira rubatsiro kubva kumutemo kubva kumagweta pachirongwa chekugadzirira chibvumirano chemupi.
Chii chinotaurwa muchibvumirano chemupi?
Kazhinji zvinotevera zvinowisirwa muchibvumirano chevanopa:
Zita nekero ruzivo rweanopa
Zita nekero ruzivo rweanotarisirwa mubereki (s)
Zvibvumirano nezvechipo chemurume chakadai serefu, kutaurirana uye kubata
Zvekurapa zvakadai sekutsvaga mune zvakakanganisika nhaka
Mvumo yekuongorora data rekurapa
Chero mvumo. Izvi zvinowanzo kuve mutengo wekufamba uye mutengo wekuongororwa kwachiremba kweanopa.
Kodzero nezvisungo zvemupi.
Kusazivikanwa uye kodzero dzekuvanzika
Mutoro wemativi ese
Zvimwe zvinongedzo muchiitiko chekuchinja mune mamiriro
Kodzero dzepamutemo uye zvisungo zvine chekuita nemwana
Kana zvasvika pamwana akazvitakura, mupi asingazivikanwe kazhinji haana basa repamutemo. Semuenzaniso, mupi haakwanise kumanikidza kuti zviri pamutemo ave mubereki wemwana akabata. Izvi hazvichinje chokwadi chekuti mune mamwe mamiriro ezvinhu zvinoramba zvichikwanisika kuti mupi ave pamutemo mubereki wemwana. Nzira chete yekuti mupi ave mubereki zviri pamutemo ndeyekuziva mwana akaberekwa. Nekudaro, mvumo yeanotarisirwa mubereki inodiwa kune izvi. Kana iye akabata pamuviri atove nevabereki vaviri vepamutemo, hazviite kuti mupi aone mwana akagamuchirwa, kunyangwe nemvumo. Kodzero dzakasiyana kune mupi anozivikanwa. Muchiitiko ichocho, semuenzaniso, chirongwa chekushanyirwa uye alimony inogona zvakare kutora chikamu. Saka zvine hungwaru kuti ivo vangangove vabereki vakurukure uye vanyore zvinyorwa zvinotevera neanopa:
Kuraira zviri pamutemo. Nekukurukura nezvenyaya iyi neanopa, vangangove vabereki vanogona kudzivirira kuti ivo pakupedzisira vanoshamiswa neicho chekuti mupi anoda kuziva mwana akagamuchirwa seake uye nekudaro anoda kuve mubereki wake zviri pamutemo. Naizvozvo zvakakosha kuti ubvunze mupi pamberi apo kana angadewo kuziva mwana uye / kana kuchengetwa. Kuti tidzivise nhaurirano mumashure, zvine hungwaru zvakare kunyora zvakajeka izvo zvakurukurwa pakati peanopa uye nevabereki vakatarisirwa pane ino chibvumirano chemupi. Mupfungwa iyi, chibvumirano chemupi chinodzivirira zvakare zviri pamutemo mubereki wevabereki (s) vakatarisirwa.
Kubata uye Kuchengetedza. Ichi chimwe chikamu chakakosha chinokodzera kukurukurwa zvisati zvaitika nevangangodaro vabereki uye mupi muchibvumirano chemupi. Zvikurukuru, zvinogona kurongedzwa kana paine kusangana pakati peanopa mbeu nemwana. Kana izvi zviri izvo, chibvumirano chemupi anogona zvakare kudoma mamiriro ezvinhu izvo zvichaitika pasi pazvo. Zvikasadaro, izvi zvinogona kudzivirira mwana akazvarwa kubva pakuve (asingadiwe) nekushamisika. Mukuita, pane misiyano muzvibvumirano zvinoitwa nevangangodaro vabereki nevanovapa mbeu. Mumwe mupi wemurume anozobata pamwedzi kana nekota nemwana, uye mumwe mupiro wesperm haasangane nemwana kusvika asvika makore gumi nematanhatu. Pakupedzisira, zviri kune anenge apa uye avo vangangove vabereki kubvumirana pane izvi pamwe chete.
Mwana anotsigira. Kana zvanyatsotaurwa muchibvumirano chemupi kuti mupi anongopa mbeu yake kuvabereki vakatarisirwa, kureva kuti hapana chimwe kunze kwekuita kuti iwanikwe mukumisikidza kwekugadzira, mupi haafanire kubhadhara mwana rubatsiro. Mushure mezvose, mune iyo kesi haasi iye anokonzeresa mumiriri. Kana izvi zvisiri izvo, zvinokwanisika kuti mupi anoonekwa seanokonzeresa uye anosarudzwa sababa vepamutemo kuburikidza nekuita kwababa, vanozosungirwa kubhadhara mari. Izvi zvinoreva kuti chibvumirano chemupi chinopa hachisi chakakosha chete kune ivo vabereki (kana) vabereki, asi zvirokwazvo zvakare kune iye mupi. Nechibvumirano chemupi, mupi anogona kuratidza kuti mupi, izvo zvinova nechokwadi chekuti vangangove vabereki (vabereki) havazokwanisa kukumbira kuchengetwa.
Kunyora, kutarisa kana kugadzirisa chibvumirano chemupi
Iwe unotova nechibvumirano chemupi uye pane mamiriro ezvinhu akachinja iwe kana kune anenge apa? Ipapo kungave kuchenjera kugadzirisa chibvumirano chemupi. Funga nezvekufamba kune mhedzisiro kuhurongwa hwekushanya. Kana shanduko yemari, izvo zvinoda kuti kuongororwa kwe alimony. Kana iwe ukachinja chibvumirano munguva uye ukaita zvibvumirano izvo mapato ese ari maviri anotsigira, iwe unowedzera mukana wehupenyu hwakagadzikana uye hune rugare, kwete zvako chete, asiwo zvemwana.
Mamiriro ezvinhu anoramba akafanana here kwauri? Kunyangwe ipapo zvinogona kuve huchenjeri kuti chibvumirano chako chevapi vako chitariswe nachiremba wezvemitemo. At Law & More isu tinonzwisisa kuti mamiriro ese ezvinhu akasiyana. Ndicho chikonzero nei tichitora nzira yedu pachedu. Law & MoreMagweta inyanzvi mumutemo wemhuri uye vanokwanisa kuongorora mamiriro ako newe voona kana chibvumirano chemupi chakakodzera kugadziridzwa.
Iwe ungade here kutora chibvumirano chemupi pasi pekutungamirwa negweta remutemo wemhuri? Kunyangwe ipapo Law & More yakagadzirira iwe. Magweta edu anogona zvakare kukupa iwe rubatsiro rwemutemo kana kuraira kana zvikaitika kukakavadzana pakati pevabereki vakatarisirwa nemupi. Une mimwe mimwe mibvunzo here panyaya iyi? Ndapota taura Law & More, isu tichafara kukubatsira.
Previous Post Kuendesa kweKutora
Next Post Kutonga munyaya yemamiriro ekunze yakanangana naShell